Browse: Home / စာအုပ်စင်	စာအုပ်စင်
ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားကို စစရောက်ခါစက မြန်မာစာအုပ်တွေ မဖတ်ရတဲ့ဒုက္ခကို တော်တော်လေးခံစားလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတုန်းက ebook ရှယ်တဲ့ဆိုဒ်တွေက အခုလိုမျိုးအများကြီးမရှိသေးပါဘူး။ မှတ်မှတ်ရရ ချယ်ရီသစ္စာ တစ်ခုလောက်ပဲကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ (ကျွန်တော်အဲဒီဆိုဒ်တစ်ခုပဲသိတာပါ တခြားဆိုဒ်တွေလည်းရှိမှာပါ။) အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ စာအုပ်လေးတွေကို upload ဆိုဒ်တွေမှာတင်ပြီးဟိုတင်ဒီတင်နဲ့ သူများတွေကို ရှယ်တာပဲ။ နောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေများလာတော့ esnips မှာတင်ပြီး စာအုပ်စင်လေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့စာအုပ်လေးတွေ ကာတွန်းလေးတွေကို စာအုပ်စင်လေးပေါ်တင်ထားပါတယ်။ စာအုပ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကျော်နဲ့ ပုံမှန် update လုပ်ပေးနေပါတယ်။ အားလပ်ချိန်တွေမှာစာအုပ်လေးတွေ ဖတ်ပြီးစိတ်အပန်းဖြေလိုသူတွေဖို့ ၀ိညာဉ်သစ်ရဲ့ စာအုပ်စင်မှာ စာအုပ်တွေဒေါင်းပြီးဖတ်ရအောင်။
update: ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကို တိုက်ရိုက်ဖတ်လို့ရအောင်တင်လို့ရတဲ့ web လေးတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆို ကျွန်တော်စာအုပ်တွေကို အဲဒီမှာတင်ပေးသွားမှာပါ။ အောက်မှာလည်း ကျွန်တော်မှာရှိသောစာအုပ်များထဲမှ အချို့ကို တိုက်ရိုက် ဖတ်နိုင်အောင်တင်ပေးထားပါတယ်။
PDF Version ဆိုတဲ့စာအုပ်များဖတ်ရန် ထိုလင်ခ့်သုို့သွားပြီး ဒေါင်းလုပ်ဆိုသော ခလုတ်ကို နှိ်ပ်ပါ။
ချစ်စံဝင်း - တော်ဝင်စံထားမိန်းမသား ဆောင်းဝင်းလတ် - ဆူးလေးဆူးတယ်ခုးမယ် (06/28)
ပြည်ပိုင်မူးအိမ် - ကျူးပစ်ဒ်၏ရင်ဖွင့်မြှား
မင်းလူ - သင်္ခါရများ မင်းလူ - ခေါင်းလောင်းထိုးသောဝတ္ထုတိုများ (06/26)
တာရာမင်းဝေ - ပန်းခေတ်ကလမင်း နီကိုရဲ - ဇွတ်
နီကိုရဲ - ပန်းပွင့်ကိုဖယ်ကြည့်မှမြင်ရမဲ့လမင်း (06/27)
ဂျူး - ရာဇ၀င်ထဲမှာ မောင့်ကိုထားရစ်ခဲ့ ဂျူး - လရဲ့အောက်ဖက်မိုင်အဝေးမှာ ဂျူး - ကံကြမာကိုမယုံကြသူများ
ဂျူး - ကျွန်မ၏သစ်ပင် (06/30) ဂျူး -ကြယ်ကြွေတို့အတောင်ပံ (06/30)
ဂျူး - မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ဖွင့်ဟ၀န်ခံချက် (06/30)
ဂျူး - ရဲရင့်သော နှလုံးသား-၀တ္ထုတို (06/30)
ဂျူး - သူတို့တွန်းအားကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်မိသွားတာပါ။ (၀တ္ထုတို) (
မစန္ဒာ - ငြိုးမာန်ဖွဲ့သူရယ် မစန္ဒာ - ငယ်သူမို့မသိပါ မိုးမိုး(အင်းယျား) - စိန်တစ်ပွင့် ခင်မျိုးချစ်ဂျူနီယာဝင်း - ဆယ်နှစ်လရာသီပန်းများနှင့် ပွဲတော်များ (06/30)
ငွေကြည် - ပြည့်ပြည့်၀၀ဟာသများ (06/26)
စောတင်မောင် - ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောမိုးတိမ် ( ၁ + ၂) စောတင်မောင် - ပျံလွားပါဝင်သော လွင့်မျောတိမ်တိုက် ၃+၄
စောတင်မောင် - အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၁+၂) စောတင်မောင် - အမှောင်ကမ္ဘာ ( ၃ +၄) စောတင်မောင် - နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၁ စောတင်မောင် - နှောင်ကြိုးကိုယ်ဆီ ၂ ဆွေမင်း - တွတ်ပီပါဝင်သော ဘ၀တစ်ခုအမှတ်တရ (PDF version)
သမိန်ပေါသွပ် - မိုးနတ်မင်းကာတွန်းများ သမိန်ပေါသွပ် - မင်္ဂလာဆောင် သမိန်ပေါသွပ် - မထီးကျွန်း သမိန်ပေါသွပ် - ဘုံမြင့်စံ ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏ - သမိန်ပေါသွပ် ပါဝင်သော ကာတွန်းအက်ဆစ်
သမိန်ပေါသွပ် - ဖတ်ကြမယ်ဟေ့ကောင်းကောင်း ၀ိဇ္ဖာ - တစ်ရွာလုံးနဲ့တစ်ယောက် (ရွှေအဆင်း ခေတ်ပြိုင်မှတ်စုများ) (PDF version) ၀ိဇ္ဖာ - ပန်းတစ်ပွင့်၏ရံနံခက်ဆစ် (update)
၀ိဇ္ဖာ - ကျွန်တော်၏ဓာတ်တိုင်	(update)
ကာတွန်းအောင်ရှိန် - ဖိုးဆိတ်ဖြူနဲ့ ကြာဇံပါဝင်သော မဟာဂနိုင် ကာတွန်းအော်ပီကျယ် - သူ/သူမ ဟာသစာအုပ်များ
ဦးကျော်ဇေယျ - ရှေ့နေနှင့်တရားခွင်ဟာသများ (06/ 26)
အကြည်တော် - လှအိုးကွဲ အကြည်တော် - သံသရာရထား အကြည်တော် - ယ္ခောမနဲ့တစ်ထောင့်တစ်ည (06/27)
ဗဟုသုတပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ ကိုကို(စက်မူတက္ကသိုလ်) - အယ်ဒီတာဒိုင်ယာရီ (7days news အယ်ဒီတာဒိုင်ယာရီစည်းမူ) (PDF version)
ချစ်နိုင်( စိတ်ပညာ) - စစ်သေနင်္ဂဗျူဟာ .. မောင်သာချို - သမီးလေးဖတ်ဖို့ (06/28)
ရန်အောင် - အိမ်ထောင်ရေးအဘိဓမ္မာ လူထုစိန်ဝင်း - မူပိုင်ခွင့် လူထုစိန်ဝင်း — လူငယ်နဲ့အချစ် လူထုစိန်ဝင်း — လူငယ်နဲ့တာဝန်ယူစိတ် ( PDF version) လူငယ်တို့စကားဝိုင်း (PDF version)
ဒေါက်တာသန်းထွန်း - သမိုင်းနဲ့စကားပြောခြင်း ဦးဖိုးကျား - ၃၇ မင်း(06/28)
ဦးပေါ်ဦး ၏ စကားအင်္လကာ (06/28)
နေ၀င်းမြင့် - အိုင်ဒီယာအက်ဆေးများ (06/28)
အောင်သင်း - အနာဂတ်ကိုမကြောက်နဲ့ (06/28)
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာစာအုပ်များ ဒေါက်တာအောင်ခင်ဆင့် - ဖိုနဲ့မဆက်ဆံရေး နိုင်ငံရေးစာအုပ်များ
သတင်းစာဆရာကြီး ဦးဝင်းတင်- စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ကြသူများ ကွန်ပြူတာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစာအုပ်များ ရှင်းလင်းချက်များ
ArchivesCategoriesLatestPopular	July 2008
Web Site အညွန်း
Hello world!အိုင်းစတိုင်းဆိုတဲ့ ကြက်တူရွေးလေးTop Ten 2လမ်းဘေးက ကာရံများစာအုပ်တွေကို တိုက်ရိုက်ဖတ်နိုင်ပါပြီ။fireshot(screen capture tool) for firefox bowserscreen magicခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ်ထာဝရBig Bag - VillainYou needapopular posts plugin to use this options. Here are some options.Popularity Contest
Copyright © 2015	Bookshelf. Powered by WordPress.